Sakafo Malagasy - Page 2
Posted on October 22, 2015 November 5, 2015 by Neny
Sakafo malagasy Ny sakafo atolotra antsika androany indray ary dia gana ritra. Efa hita amin’ny antsipirihany ihany ny fomba fikarakarana azy ao amin’ity horonan-tsary ity fa misy fanamarihana vitsy ihany tiana apetraka ahatsara tsiro ny gana. Rehefa manadio ny gana ianao dia aza adino ny manala ny zavatra midongona eo ambonin’ny tsingim-bodiny. Iny mantsy no […]
Posted on October 14, 2015 November 5, 2015 by Neny
Raha te hanaingo ny steak-nao ianao dia afaka atao toy izao. Ampiaraho amin’ny ovy endasina sy salady ravina ary voatabia dia hitanao fa tena manome endrika mahafinaritra toy izao ilay izy. Aza adino ary ny manandrana ary afaka alefanao sary aty aminay ny zavatra vitanao. Raha misy fanontaniana ihany koa dia aza misalasala mandefa izany. […]
Posted in Sakafo Malagasy	| Tagged hen`omby, Sakafo, Sakafo Malagasy, steak salad
Posted on October 12, 2015 November 5, 2015 by Neny
Inona no atao mba ahatonga ny kirepinao ho tonga lafatra? Efa maro ireo nanontany hoe ahoana no atao raha toa ka mba te ahavita kirepy tsara. Izany hoe tsy simba ny endriny ary mora avadika no tsy be menaka. Efa nandramako mihitsy ity fomba ity ka inoako fa izay anaraka azy dia ahita voka-tsoa avy […]
Posted in Sakafo Malagasy	| Tagged Kirepy, Sakafo
Posted on October 12, 2015 October 12, 2015 by Neny
Salama daholo e! Betsaka ireo nanontany hoe ahoana no fomba anaingona ny sakafo izay karakaraina. Mba ampisokatra ny vavony sy ahafaly maso, tsotra dia tsotra no tokony ataontsika. Raha tiana anome endrika tsara sady manintona ny sakafo karakarainao dia ny loko no atao maromaro. Ny loko tsy azo adinoina dia ny maintso sy mena. Ny […]
Posted in Voavao	| Tagged Akoho, Sakafo gasy, Sakafo Malagasy, Sakafo Neny
Posted on October 12, 2015 by Neny
Efa afaka jerenao ao amin`ny Youtube ny fomba fanaovako katless
Posted in Voavao
Faly aho! Misaotra antsika rehetra amin`ny fanohanana ny Sakafo Malagasy
Posted on October 7, 2015 October 7, 2015 by Neny
Misaotra antsika rehetra manohana! Vao iray andro monja dia efa nahatratra 100 mahery ny mankafy. Tohizantsika hatrany ny fanindrahindrana ny maha-malagasy koa zarao amin’ny namana rehetra ny pejy. Isaky ny alarobia sy alahady i Neny no hamoaka horonantsary koa aza adino ary ny mijery sy manandrana e! Raha misy soso-kevitra na tsikera entina manatsara ny […]
Some of the Malagasy recipes I am going to video record
Posted on October 5, 2015 October 5, 2015 by Neny
I took the initiative into creating this website in which I am going to show case 100 Malagasy recipes. Here are some of those : Crabe Hen`omby ritra Hen`omby sy anana rony Hen`omby, patsa, ovy ary ana-malaho Henakisoa ritra Henakisoa sy anana Henakisoa sy ravitoto Henakisoa sy tsaramaso Akoho sy henakisoa Akoho sy coco Krokety […]